Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Kedu ka Suite dị na Sandals Luxury Resorts
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • culinary • Akụkọ Curacao • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem
Akpụkpọ ụkwụ Sandals Resorts Suites
Ọ nweghị ụlọ oriri na ọ otherụ otherụ ndị ọzọ na-ewere ọnụ ụlọ na ime ụlọ ha nke ọma dị ka Sandals Resorts. Ha echewo echiche ihe niile iji mee ka ebe ndị ọbịa bụrụ ezumike ịhụnanya ihunanya. N'ịbụ ndị nkasi obi na-enweghị mgbagha na okomoko nke ụwa gbara ya gburugburu, ndị ọbịa nwere ike ịnwe nsogbu ikpebi ihe yiri paradaịs karịa, ime ụlọ na ime ụlọ ma ọ bụ oke osimiri Caribbean mara mma.
Na ebe a na -ere akpụkpọ ụkwụ, ndị ọbịa ga -abanye na oke oke osimiri Caribbean kachasị mma na onyinye pụrụ iche.
A maara ebe nkwalite akpụkpọ ụkwụ maka inye nnukwu ụlọ 5 kpakpando kachasị n'ụwa.
N'okwu onye na -eme ihe nkiri na onye ọchị ọchị Jackie Gleason, nke a makwaara dị ka “Onye Ukwu,” na Sandals ọ dị mfe ndị ọbịa ịsị, "Ọ dị mma!"
Ụlọ na -enweghị atụ nke Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ niile na -enye ọtụtụ ụzọ pụrụ iche iji nweta ụwa nzuzo nke ihunanya na izu ike. Site na blua-top hideaways na ime ụlọ elu ọdọ mmiri nkeonwe ruo nnukwu ụlọ na gburugburu ma ọ bụ ịlaghachi azụ, nchịkọta a na-enwetụbeghị ụdị ya na-echere. Ụfọdụ ụlọ ime ụlọ na -enwekwa ohere nke ịbụ onye onye na -alerụ mmanya na -azụ nke Guild of Professional English Butlers zụrụ ka ndị ọbịa nwee ike mezuo nrọ ha n'ụlọ ezumike emere maka ịhụnanya.
NKWUKWU AKWỤKWỌ SANDALS
Romance na -arị elu na ọkwa ọhụrụ anyị SkyPool Suites. Mepee ọnụ ụzọ ime ụlọ iji kpughee ọdọ mmiri na -adịghị asọba mmiri nke na -agwakọta nke ọma na mmiri dị anya. Mosaic glass tiling na -e skyomi mbara igwe, ebe nkume coral gbara ya gburugburu na -akpọghachite ya niile n'ụwa. Ma ọ bụ si n'ụlọ ezumike banye na mbara ihu ebe Tubụ Trunquility Soaking Tub na -enye egwuregwu ihunanya na -atọ ụtọ.
Oke-mmiri ime ụlọ
Oke mmiri mbụ nke Caribbean na-agbanwe egwuregwu niile. N'ịfefe n'elu oke osimiri turquoise, ụlọ ọhụrụ ndị a na-egosipụta ala a na-ahụ anya maka ikiri oke osimiri, Tubụ Trunquility Soaking Tub, ihe mgbochi mmiri n'elu mmiri maka mmadụ abụọ, ọdọ mmiri na-enweghị njedebe nkeonwe, yana ọrụ onye na-a butụ mmanya.
Ijikọta imezi ime ụlọ na ịma mma n'èzí, ime ụlọ ndị a bụ akara ngosi okomoko akpụkpọ ụkwụ. A na-edobe Millionaire Suites na Sandals St. Lucia na nnọkọ ebe a na-eme njem, nke ọ bụla na-anya isi ogo 180 nke echiche oke osimiri kachasị mma nke agwaetiti ahụ ma na-egosipụta ọdọ mmiri na-abanye na mmiri na-asọ asọ na mmiri mmiri na ebili mmiri. Millionaire Suites na Sandals Negril na -enye okomoko zoro ezo gụnyere patio nkeonwe nwere ọdọ mmiri.
Beachdo Rondoval Suites
N'ịbụ nke dị n'akụkụ ọnụ mmiri, Rondovals n'ụsọ osimiri jupụtara na ikuku dị ka Zen gbara ya gburugburu site na ịma mma okike dị ịtụnanya. Naanị nzọ ụkwụ site n'ụsọ osimiri - yana ụfọdụ nri na ya - nnukwu ụlọ ndị a na -atọ ụtọ bụ ebe ezumike zuru oke maka ime ememme ịhụnanya.
Ogige Rondoval Suites
N'ịkọwapụta okomoko na ihunanya, Rondovals ndị mara mma, oke ime gburugburu, ndị ọbịa gbara okirikiri okomoko na ịdị jụụ ebe okpomọkụ. Nzọụkwụ dị n'akụkụ osimiri, banye n'ime ubi zoro ezo, ebe ezumike ịhụnanya a na -egosipụta ụlọ elu cone 20 ', ogige ubi na -akpachi anya, ọdọ mmiri nkeonwe, arịa ụlọ mahogany, na ọrụ onye na -alerụ mmanya.
Kedu ihe pụrụ iche karịa igwu mmiri ruo na nnukwu ụlọ nkeonwe? A na-eji akwa ụlọ na nkọwa dị oke mma mara Swim-up Suites nke akpụkpọ ụkwụ. Atụmatụ echiche ọgbara ọhụrụ, nke mepere emepe na-esi na patio nkeonwe banye na nsọtụ ntinye efu na nsọtụ ọdọ mmiri ọdọ mmiri na-asọ nwayọọ nwayọọ.
Mana Chere, Enwere Ihe
Ee, enwere ụlọ ndị ọzọ na-atọ ụtọ iji tụọ egwu wee mezuo ọchịchọ onye ọ bụla, dịka Romeo & Juliet Suites, Pool Pool Suites, Suite Story, Crystal Lagoon Suites, Villa Suites na Love Nest Butler Suites. Cheedị echiche ndị na-a butụ mmanya zụrụ nke ọma na-eme ihe ọ bụla onye ọbịa chọrọ n'elekere ụlọ elu. N'agbanyeghị nke ahọpụtara, ndị ọbịa ga -achọpụta ka ọ ga -esi nọrọ "nnukwu ụlọ" na ụlọ nkwari akụ akpụkpọ ụkwụ.